I-Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ama-eReaders amabili amahle kakhulu emakethe ubuso nobuso | Onke ama-eReaders
I-Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ama-eReaders amabili amahle kakhulu emakethe ubuso nobuso
AmaVillamandos | | Amazon Kindle, Ama-eReaders
Izolo nje i-Amazon yethule ngokusemthethweni okusha Kindle Oasis e-reader nge ...I-Oasis yomusa»/], i-eReader entsha ephezulu ephezulu evelele ukwakheka kwayo okuthuthukisiwe, maqondana nowandulelayo, i- Kindle Voyage e-reader, ...Ukuhamba ngomusa»/] Futhi nokugcina kahle izinto ezazinikezwa i-Kindle yangaphambilini, okwakuyi-flagship yenkampani eyayiqondiswa nguJeff Bezos. Ngemuva kokuyihlaziya izolo, ngemuva kokukwazi ukuyihlola imizuzu embalwa emcimbini i-Amazon Spain isimemele kuwo, namuhla ngeke siphuthelwe yithuba lokuyibhekana nongaphambi kwayo futhi futhi siyiqhathanise ne Kindle Paperwhite -...Kindle Paperwhite »/], esingasho ukuthi ngumfowabo omncane.
Namuhla futhi ngalesi sihloko Sizoqhathanisa i-Kindle Oasis entsha nohambo olumnandi ngokuningiliziwe, ngaphandle kokukhohlwa njengoba sishilo nge-Kindle Paperwhite. Mhlawumbe umehluko awubaningi kakhulu, kepha ubalulekile futhi yize ekuboneni kuqala abonakala njengamadivayisi amathathu afanayo ngemuva ahluke kakhulu, aqala ngokwakhiwa kwawo futhi aphele ngentengo yawo.
Uma ufuna ukwazi ukuthi i-Kindle Oasis entsha, i-Kindle Voyage ne-Kindle Paperwhite zifana kanjani, qhubeka ufunda ngokucophelela ngoba ngale ndatshana ngeke uthole lokho kuphela, kodwa nezinye izinto eziningi, esikholwa ukuthi kungenzeka ukuthi zithakazelisa ngempela uma ucabanga, ngokwesibonelo, ngokuthenga i-eReader entsha, ukungena emhlabeni wokufunda ngokwedijithali noma ukushintsha idivayisi onayo njengamanje.
Ngaphambi kokuqhathanisa isikrini sayo, intengo yayo noma izinzuzo zayo ngezindlela ezahlukahlukene, sizobuyekeza ngokuphelele izici zayo eziyinhloko nokucaciswa, ukuze sonke sizitholele ngokwethu futhi sazi ngokucacile ukuthi yiluphi lolu hlobo lwe-Kindle olusinikeza lona.
1 Izici Zokuhamba Zomusa kanye Nemininingwane
2 Izici ze-Kindle Oasis kanye nokucaciswa
3 Kindle Izici Paperwhite kanye Imininingwane
4 Umklamo; isinyathelo esisodwa emuva ukuze uqhubeke uthuthuka
5 Isikrini; ungazifuneli ngoba akukho mehluko
6 Icala elisha le-Kindle Oasis, liyadingeka futhi lanele njengokwintsha?
7 Intengo; umehluko omkhulu
8 I-Kidle Oasis, iwine le duel ngaphandle kwezimpikiswano eziningi kakhulu
Izici Zokuhamba Zomusa kanye Nemininingwane
Isikrini: sifaka isikrini esingu-6-intshi nobuchwepheshe be-e-papper, touch, ngesinqumo esingu-1440 x 1080 kanye namaphikseli angama-300 nge-intshi
Ubukhulu: 162 x 115 x 76 mm
Yenziwe nge-magnesium emnyama
Isisindo: Uhlobo lwe-WiFi 180 amagremu no-188 amagremu inguqulo ye-WiFi + 3G
Imemori yangaphakathi: 4 GB ekuvumela ukuthi ugcine ama-eBooks angaphezu kuka-2.000 XNUMX, yize kuzoncika ngosayizi wencwadi ngayinye
Ukuxhumana: Ukuxhumeka kwe-WiFi ne-3G noma i-WiFi kuphela
Amafomethi asekelwayo: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI engavikelekile nePRC ngefomethi yazo yokuqala; I-HTML, i-DOC, i-DOCX, i-JPEG, i-GIF, i-PNG, i-BMP ngokuguqulwa
Ukuqhathanisa okuphezulu kwesikrini okuzosivumela ukuthi sifunde ngendlela enethezekile futhi emnandi
1.061Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Isibonisi sokucaca okuphezulu se-300 dpi: sifundeka njengephepha, ngaphandle kokukhanya, noma kukhanya elangeni.
Ukukhanya okuzilawulayo okuhlinzeka ngezinga elifanele lokukhanya ubusuku nemini; funda ngokunethezeka amahora.
Isici se-Page Turn sikuvumela ukuthi ushintshe amakhasi ngaphandle kokuphakamisa umunwe wakho.
Funda okuningi njengoba ufuna. Ngokushaja okukodwa, ibhethri lihlala amasonto, hhayi amahora.
Ikhathalogi ebanzi yama-eBooks ngamanani aphansi: ngaphezu kwama-eBooks ayi-100 ngeSpanishi ngentengo engaphansi kuka- € 000.
Izici ze-Kindle Oasis kanye nokucaciswa
Isibonisi: sifaka isikrini esithintwayo esingu-6-intshi nobuchwepheshe be-Paperwhite obune-E Ink Carta ™ nokukhanya okuhlanganisiwe kokufunda, i-300 dpi, ubuchwepheshe befonti elungiselelwe nezikali ezimpunga eziyi-16
Ubukhulu: 143 x 122 x 3.4-8.5 mm
Kwenziwe ezindlini zepulasitiki, nohlaka lwe-polymer olwenziwe ngenqubo yokufaka amandla
Isisindo: Uhlobo lwe-WiFi 131/128 amagremu no-1133/240 amagremu inguqulo ye-WiFi + 3G (Isisindo sikhonjiswa kuqala ngaphandle kwekhava futhi okwesibili sinamathiselwe)
Amafomethi asekelwayo: Ifomethi 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI engavikelekile, PRC natively; I-HTML, i-DOC, i-DOCX, i-JPEG, i-GIF, i-PNG, i-BMP ngokuguqulwa
204Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Kindle Oasis e-reader nge ...
Umusa wethu omncane futhi olula kunayo yonke; funda ngokunethezeka amahora.
Idizayini yenkinobho ye-Ergonomic yokujika kwekhasi okungenamandla.
Uhlobo olunokuzimela okukhulu. Icala lesikhumba ngebhethri elihlanganisiwe linganweba impilo yebhethri ledivayisi ngezinyanga ezimbalwa.
Khetha umbala wekhava elikhishwayo: mnyama, i-burgundy noma i-walnut.
Ukuboniswa kokulungiswa okuphezulu okungu-300 dpi - kufundeka njengephepha eliphrintiwe.
Kindle Izici Paperwhite kanye Imininingwane
Khombisa: kufaka isikrini esingu-6-intshi nobuchwepheshe be-Letter e-paper nokukhanya okuhlanganisiwe kokufunda, i-300 dpi, ubuchwepheshe befonti elungiselelwe nezikali ezimpunga eziyi-16
Isisindo: Uhlobo lwe-WiFi 205 amagremu no-217 amagremu inguqulo ye-WiFi + 3G
Ibhethri: I-Amazon iqinisekisa ukuthi ngentengo eyodwa yedivayisi singakujabulela ukufunda amasonto ayisithupha.
13.509Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Ukuzilawula okwakhelwe ngaphakathi: ifunda imini nobusuku.
Jabulela uthando lwakho lokufunda ngaphandle kwezexwayiso ze-imeyili noma izaziso.
Umklamo; isinyathelo esisodwa emuva ukuze uqhubeke uthuthuka
Ngokufika emakethe ngonyaka owedlule wohambo olumnandi, i-Amazon ibifuna ukusinikeza idivayisi enamandla amakhulu, imininingwane ethokozisayo, kepha ngaphezu kwakho konke nge-Premium design futhi igcwele ubuhle. Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ngokumane uyibambe esandleni sakho ungabona ukuthi awubhekene nanoma iyiphi into.
Nokho, Ngokufika kwe-Kindle Oasis emakethe, inkampani eqondiswe nguJeff Bezos kubonakala sengathi ithathe isinqumo sokubuyela emuva, ukuze iye kolunye uhlangothi., okusobala ngokuthakazelisa ngokwengeziwe. Kule Kindle entsha, ipulasitiki esezingeni eliphakeme iphinde ibe ngumlingisi ophambili, ukuze sikwazi ukusinikeza idivayisi yobukhulu obuncane futhi ikakhulukazi enesisindo esiphansi kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ipulasitiki okwakhiwe ngayo lolu hlobo olusha ayisinikanga umuzwa omubi futhi ukwehliswa kwesisindo kuthakazelelwa kakhulu. Njengoba usubonile, sisuke kumagremu ayi-188 ukuthi i-Kindle Voyage inesisindo esifinyelela nje kumagremu ayi-131 okusindwa yiNew Kindle Oasis.
Ukufakwa kwecala, ngebhethri elakhelwe ngaphakathi, kungezinye zezikhwepha ze-Kindle Oasis, lapho izinto ezisezingeni eliphakeme ezazisetshenziswa ku-Kindle Voyage zingasetshenziswanga, kepha ezishintshiwe ukuze zisinikeze ezinye izinto eziningi, ezithakazelisa ngokwengeziwe, noma okungenani sicabanga kanjalo.
Mayelana nokuklama, singakusho lokho i-Kindle Paperwhite ishiya igxathu elilodwa ngemuva kwe-Kindle Oasis kanye ne-Kindle Voyage, yize ngenhlanhla iningi labafundi lingenandaba nokuklanywa kwangaphandle kwedivayisi nokuthi yini ebaluleke kakhulu izici ezibanikeza zona ngaphakathi.
Isikrini; ungazifuneli ngoba akukho mehluko
Ukube besingabeka uMusa amathathu etafuleni bese siwakhanyisa, esikrinini sayo singathola ukufana okuningi nokwehluka okumbalwa kakhulu. Futhi ukuthi izikrini zombili i-Kindle Oasis, i-Kindle Voyage ne-Kindle Paperwhite zingosayizi ofanayo, zisebenzisa ubuchwepheshe obufanayo futhi zinezisombululo ezifanayo zamaphikseli nge-intshi ngayinye.
Okunye ukwehluka okumbalwa esizokuthola mhlawumbe kungukukhanya futhi lokho kungukuthi i-Kindle Oasis ifikile emakethe izincoma ngokusinika ukukhanya okukhulu, ngisho nasezimweni eziphansi zokukhanya. Lesi sici sokwehlukanisa silahlekelwa ukubaluleka kwaso ngokwazi ukuthi amadivayisi amathathu ahlanganise ukukhanya okusivumela ukuthi sifunde, ngaphandle kobunzima futhi ngaphandle kokushiya amehlo ethu emzameni, ezimweni zobumnyama obuphelele.
Ngokungangabazeki, isikrini ngeke sibe ngomehluko osenza sithambekele ekuthengeni enye noma enye idivayisi futhi lokho ukuthi bobathathu bayafana kakhulu futhi bayahluka ngemininingwane emincane ngaphandle kokubaluleka okukhulu.
Icala elisha le-Kindle Oasis, liyadingeka futhi lanele njengokwintsha?
Kwaphela izinsuku kunamahemuhemu okuthi kungenzeka ukuthi i-Kindle entsha izofaka ikesi lapho ibhethri langaphandle lingumlingisi oyinhloko. Singasho ukuthi leli cala lingelinye lamahluko omkhulu we-Kindle Oasis entsha maqondana nohambo lwe-Kindloe futhi jikelele maqondana nanoma iyiphi i-eReader enophawu lwe-Amazon.
Ngokuya ngezidingo zomsebenzisi ngamunye, kungaba yisibusiso sangempela, yize ngesaba kakhulu ukuthi bambalwa abasebenzisi abazosizakala ngalokho nokuthi ibhethri le-eReader selivele lisinika ukuzimela okukhulu futhi ngikholelwa ukuthi akudingekile kulokhu new Kindle, futhi akwanele ukuba umehluko omkhulu maqondana nalowo owandulelayo.
Ngaphezu kwalokho, akumele sikhohlwe ukuthi lolu hlobo olusha lusinikeza ukushaja okusheshayo, okuvumela ibhethri ledivayisi ukuthi likhokhiswe ngesikhathi esifushane kakhulu. Ngabe ukhona onengqondo ngempela kwi-eReader eya ecaleni elinebhethri elakhelwe ngaphakathi?.
Intengo; umehluko omkhulu
El Ukuhamba ngomusa ize emakethe ngentengo emangaze ngaphezu kweyodwa, ngoba iningi lethu lalinama-eReaders njengamadivayisi anenani elinganeno noma elejwayelekile futhi ongatholwa yinoma yimuphi umsebenzisi. Abakwa-Amazon bakuthethelela ngokuthi sibhekene nencwadi ene-elekthronikhi esezingeni eliphakeme, eyenziwe ngezinto zePrimiyamu nokuthi isinikeze izici nokusebenza ebesingakwazi ukuba nakho kwesinye isisetshenziswa salolu hlobo. Okwamanje Le divayisi ingathengwa ngama-euro angu-189.99.
Inkampani eqondiswe nguJeff Bezos iqhubeke nokugcina kukhathalogi yayo i-Basic Kindle ne-Kindle Paperwhite, engathengwa ngama-euro angu-79.99 kanye nama-euro ayi-129.99 ngokulandelana.
Ukwethulwa kohlobo lwe-Kindle Voyage akuhambanga kahle esitolo esikhulu esiku-inthanethi futhi yize bekunezinkinga zokuqala zesitoko, ukuthengisa kusheshe kwaveza izibalo ezinhle. I- I-Oasis yomusa Kusho ukuqhubekela phambili futhi lokho ukuthi intengo yayo isaphakeme kunaleyo yohlobo lwe-Kindle Voyage, ngaphandle kokuthi, njengoba sibonile, isinikeze izinto ezintsha eziningi kakhulu. Okwamanje le divayisi kungathengwa emakethe ngama-euro angama-289.99, intengo enqatshelwe ngokuphelele yenani elikhulu labasebenzisi abangacabangi nokubheka ukuthi kungenzeka yini ukusetshenziswa kwemali yinani lemali encwadini ye-elektroniki, abangayisebenzisa kuphela ukujabulela ukufundwa kwedijithali.
Umehluko wentengo phakathi kwamadivayisi amathathu ubaluleke impela futhi namuhla kunzima ukuthola abasebenzisi abaningi kakhulu abazimisele ukutshala cishe ama-euro angama-300 ku-eReader. Vele, ngokwenza kanjalo sizoba ne-Kindle nge-premium design futhi enezici ezithandwayo nokucaciswa.
Uma sithambekele ekusebenziseni imali encane, ngama-euro ayi-129.99 ama-Kindle Paperwhite awufanele sizoba nohlobo oluhle kakhulu oluzosivumela ukuthi sikuthokozele ukufundwa kwedijithali, okuyiyona phela inhloso ngokuthengwa kwe-eReader. Singasho ukuthi idizayini ingeyesibili.
Umehluko wentengo uphezulu; Ngabe kuningi ngokwedizayini nokusebenza njengoba kufanele ukhokhe lowo mehluko?.
I-Kidle Oasis, iwine le duel ngaphandle kwezimpikiswano eziningi kakhulu
Kuyiqiniso ukuthi i-Amazon ikwazile ukwenza i-Kindle Oasis ibe nesisindo esiphansi kakhulu nomklamo owenziwe ngcono kakhulu, ofaka ikhava entsha esisinikeza umthamo owengeziwe webhethri, kepha kulapho-ke lapho singathi izindaba zifikile. Ukube i-Kindle Voyage ibiyinguqulo engu-1.0 yedivayisi, le Kindle Oasis ngicabanga ukuthi ingaba ngu-1.2 ngaphandle kwezinkinga, lapho sonke besilindele ukuthi ibe ngu-2.0 nezindaba ezibalulekile.
I-Kindle Oasis entsha ingumnqobi wale duel iye kwabathathu, yize ingenazimpikiswano eziningi kakhulu futhi ngentengo ekhuphuke ngokungasekho lutho futhi ayikho ngaphansi kwama-euro angama-100 ngokuqhathaniswa nohambo lwe-Kindle. Sonke besilindele okuningi kakhulu ku-Kindle omusha nokuthi izofaka izici ezintsha hhayi icala nje ngebhethri elakhelwe ngaphakathi. Leli cala lingasiza kakhulu ku-smartphone enempilo yebhethri emfushane, kepha kwi-eReader ebhethri layo elingahlala amasonto ambalwa ngobuqotho angiwuboni umqondo noma usizo.
Ku-duel eqinile, owinile kuzoba yi-Kindle Oasis, njengoba sishilo, kepha uma sibheka intengo futhi ikakhulukazi sibheka lokho esikufunayo ku-eReader, mhlawumbe futhi ophumelele kuzoba yi-Kindle Paperwhite, Kindle elinganiselayo emlandweni ngentengo emangazayo.
Ngubani ophumelele kule duel phakathi kwe-Kindle Oasis entsha, i-Kindle Voyage ne-Kindle Paperwhite yakho?. Ungasitshela umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe, esithangamini sethu noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi lapho sikhona futhi sikulungele ukuxoxa ngalesi noma esinye isihloko nawe.
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » Hardware » Ama-eReaders » I-Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ama-eReaders amabili amahle kakhulu emakethe ubuso nobuso
Hhayi-ke ngaphoxeka, ngilinde isikhathi eside ukuthi ukuphela kuhunyushelwe kunguquko elula yobuhle, ngokombono wami ayikhangi njengohambo.
intengo ibonakala ihlanya kimi.
ayikho iprosesa entsha, akukho sikrini esithuthukisiwe, akukho inki yombala, njll.
Sisekhona eNkathini Ephakathi yabafundi, ingabe ikhona inkampani engalokotha ithathe isinyathelo esibheke eRenaissance and Modernity?
Ifihlwe kuphi iprosesa elidumile le-imx7, lapho isikrini esinemibala, noma sicishiwe, lapho sikhokhiswa ngamandla elanga, ...
ukweqa okufanelekile kuzofanela kuvele kwenye inkampani, hhayi kusuka e-amazon
izingulube zasendle kusho
Ngingathanda ukuzama i-Oasis. Nginesiqiniseko sokuthi kukhululekile ukubamba ngesandla esisodwa. Mayelana nalokhu, ngihalalisela i-Amazon ngokwakhiwa kwale divayisi. Nginokungabaza ukuthi kuzoba ntofontofo kanjani ukucindezela izinkinobho zomzimba, nakanjani kulula kodwa ngizohlala ngizibuza ukuthi kungani kungekho noyedwa olingise isondo elincane elalinalo iPapyre 5.1 endala. Angikaze ngibone okunye okunethezeka ukuvula ikhasi eliphethe idivayisi ngesandla esisodwa.
Inani yilokho okungicasulile. Kuyabiza kakhulu. Ngicabanga ukuthi iqiniso lokufaka ikhava linokuthile (okuningi) ukukwenza nalo. Umbuzo uthi, kungani beyifaka, ngaleyo ndlela benyusa intengo yedivayisi, esikhundleni sokuyinikezela ngokuhlukile njengomphelelisi? Angijwayele ukusebenzisa icala ngoba benza idivayisi ibe mbi (hhayi kuleli cala, enhle kakhulu) futhi bakhulisa isisindo kakhulu ngakho-ke angiqondi lapha ukuthi kungani i-Amazon ithathe isinqumo sokuyifaka. Izizathu zabo zizoba nazo.
Kuhle kakhulu ukuthi ikhava inikeza ukuzimela okwengeziwe kepha ngicabanga ukuthi ukuthuthuka okuhle kuyokwenzeka ngosuku lapho befaka ipaneli yabo yelanga ephathekayo bese beyenza ikwazi ukuzimela kumandla kagesi. Ngokuncane okudliwa ngabafundi ngicabanga ukuthi kuyinto engenzeka. Ngicabanga ukuthi uma bengakwenzanga, kungenxa yesakhiwo esithile noma isisindo noma inkinga yezindleko. Angazi.
Njengoba usho ku-athikili, umehluko ngukuthi: ukukhanya kwensiza uqobo, ukuzimela okuningi (nekhava), ikhava ifakiwe, ukwakheka okungcono nokukhanya okungcono. Ingabe kwanele ukufakazela umehluko wamanani? lowo ngumbuzo.
Okwamanje ngisahamba neKP2 yami "endala".
Udaba lwe-Kindle Oasis ngecala ukuthi kubonakala sengathi ngaphandle kwebhethri lecala i-auntonomy ye-Kindle ayidluli amasonto ambalwa. Futhi lokhu kungenxa yokuthi i-Amazon ithembele eqinisweni lokuthi iningi labanikazi belinye lala ma-e-Readers bahlala beliphatha ngecala.
Yebo, kuphela phakathi kwabo bobabili lolu hambo, ngoba angiboni kungathuthuka kwangempela e-oasis. Kepha uma kufanele ngikhethe onqobayo, i-kobo h2o iwina ngokusobala ngokudilika komhlaba njengomfundi ngokusebenza okuhle emakethe kanye ne-firmware yokufunda okuhle kakhulu nokulungiswa. Yize ine-dpi encane. Uma kungumbuzo we-DPis futhi uhlala ku-6 "ophumelele ngokusobala yi-kobo hd ngaphandle kombuzo ngekhwalithi yamanani.
Ngine-Kindle 7th neKobo Glo HD futhi ngiyaxolisa ukusho ukuthi iGlo yenziwa kancane uma iqhathaniswa ne-Kindle PaperWhite nayo enama-dpi angama-300.
Intengo emba eqolo ngaphandle kokunikeza noma iyiphi into emisha ephawulekayo. Kuyinto "efanayo efanayo" kepha ebiza kakhulu. Ukudumazeka okuphelele. Intuthuko kufanele ihambisane nekhwalithi yezikrini. Ukuthi udaba lwesizinda sabamhlophe sebephelele kanye nezinhlamvu ezimnyama eziqhathaniswe ngokuphelele alukakaxazululwa kukhombisa ngokusobala ukuthi akukho ukuzibophezela okunqunyiwe ekwenzeni izinto ezintsha. Njengoba othile esho; Sisekhona eNkathini Ephakathi yabaholi bokuqala.
Vumelana ngokuphelele nawe. Bengihlala ngithi u-Eink kufanele asebenze kulokho, umehluko. Isizinda esimhlophe (manje esifihlwe ukukhanya okuhlanganisiwe) nezinhlamvu ezimnyama. Ngicabanga ukuthi bazokwethula ubuchwepheshe obusha ngenyanga ezayo ... ukubona ukuthi yiziphi izindaba abazikhiphayo.
Ophumelele akusilo uhambo noma i-oasis. Umhlophe wephepha.
Nami angifuni ikhava. Ukuthi bayayithengisa yomile bese siyakhuluma. Kodwa-ke, angikuboni ukuthuthuka kunomuthi wami wephepha.
U-Enric Renart kusho
Akekho kubo "ongudli ongcono kunabo bonke." Uma kukhona, zinguMusa ongcono kunayo yonke, "phezulu kwebanga", kepha ukuze kusetshenziswe okukhethekile ne-Amazon. Yebo, ngiyazi, ngiyalinganisa futhi ngiyaguqula ... kepha ... kuthiwani ngeDrm? Angikwazi ukwamukela njengenketho evumelekile "ngokuzenzakalela" into ethile engekho emthethweni. Ukweqa i-Drm akufanele, kuqala, kube inketho. Noma kunini lapho ngikwazi khona, ngithenga ngaphandle kwe-Drm, uma ngifuna i-Kindle ngangiyofuna iphepha elimhlophe noma okuyisisekelo ngaphandle kokukhanyisa, ngoba la mathoyizi amabili abiza inani eliphakeme kakhulu ngenhloso enzelwe wona: ukufunda Okumangazayo nge okuyisisekelo noma nge-Bq Cervantes, ngamanani aqondakala kakhulu).
Phendula ku-Enric Renart
UJerry Siegel kusho
Ngiyabonga ngendatshana yakho, yangisiza kakhulu ekukhetheni
Njengoba nganginquma ukuthenga i-Kindle entsha, ngashaywa yi-Voyage ngokubukeka kwayo okuncane kanye nakho konke ukubuyekezwa kwe-raasis kwe-Oasis.
Ngithi isici se-MINIMALIST futhi angisho i-Oasis, ngokombono wokuklanywa nokuhlanzeka i-Voyage yi-minimalism ku-e-reader.
Manje, akusikho lokho kuphela. ngokombono wezobuchwepheshe iphakeme kunabo bonke, inobuchwepheshe obuningi ukwedlula noma ngubani. Izinkinobho zothuli ziphelelwe yisikhathi. Sekwedlule. Uma kungukuthi ziyasebenza, zinjalo, kufanele nje uphothule ingcindezi bese ubamba umunwe wakho bese ucindezela ukuvula ikhasi, ngempendulo ethintekayo njenge-Apple Watch.
BENZA UMSEBENZI futhi bangagqami !!!
Kungumklamo uJonathan Ive azowenza. Izinkinobho azibonakali.
Nezinto zokwakha !!!
Izinkinobho zesiliva nekhabhoni, umzimba we-magnesium vs ipulasitiki lashukumisa.
Kulungile, ngesisindo. Ngamakhava ayinzima kangako. Futhi i-origami, ezobe ingajwayelekile, kepha iyasebenza futhi inika ukuthinta kwaseJapan kukho konke.
I-ergonomics ngombono omuhle kakhulu we-oasis incike ezandleni onazo, i-Oasis ingahle ibe ncane kakhulu yize isixazululo esibuyisekayo sixazululiwe, kepha ikuphoqa ukuthi ufunde njalo ngesandla esisodwa.
Kunoma ikuphi kuyinani elingcono kakhulu maqondana nohambo olungunxande.
Ukuze ngiyiphothule kahle ngingasho ukuthi lolu hambo luzosetshenziswa ebhodini lonke nokuthi i-Oasis ingaludlula kahle ngesikhathi kufundwa.
Kukhona isixazululo, thenga i-SUV Voyage, ne-Oasis ukuze uyifunde embhedeni (udlala nje).
Ingabe uhlobo oluhle kakhulu?
Uhlobo oluhle kakhulu kuzoba yi-Voyage - enezinkinobho zayo ezingabonakali - nosayizi nobukhulu be-Oasis.
AmaSekethe asekhoneni awakubeki ngaphezu kohambo, kungubuhle besikhathi esizayo nohambo olwedlulela esikhathini esedlule.
Futhi enye into ... ukukhanya okuzenzakalelayo kuyintokozo okufanele ibe khona kunoma iyiphi idivayisi yekusasa.
Ama-10 LEDs vs the 6 of the Voyage awenzi mehluko, izikhalazo zero ngokukhanya kanye nephepha elimhlophe elikhanyayo.
PRICE, i-Voyage ne-Origami is -only- € 50 - ishibhile. Ngakho-ke lokhu akuyona inkinga.
I-Oasis enobuchwepheshe be-Voyage yinto encane engenziwa ngcono.
Kusho konke lokhu ngenhlonipho 😉
Phendula uJerry Siegel
Ngiyabonga ngendatshana yakho, yangisiza kakhulu ekukhetheni.
Kuya ngezandla onazo, i-Oasis ingahle ibe ncane kakhulu yize isixazululo esibuyisekayo sixazululwa, kepha ikuphoqa ukuthi uhlale ufunda ngesandla esisodwa.
Kukhona isixazululo, thenga i-Voyage SUV, ne-Oasis ukuze uyifunde embhedeni.
Kufanele ngithenge eyodwa yosuku lokuzalwa kumfundi wephepha omubi kakhulu, ungancoma ini? Kufanele ngibukeke kahle kakhulu
I-Kindle Oasis vs Kobo Aura H2O, ukungqubuzana kwe-colossi?
I-plugin entsha ingeza umbhalo enkulumweni ku-Caliber